Profaịlụ nke -lọ ọrụ-Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd.
Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd nke hiwere na Jenụwarị 2015, dị na mpaghara Changsha Wangcheng nke akụ na ụba na teknụzụ mara mma. Ọ bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu na-ejikọta nyocha na mmepe onwe ha, nyefee teknụzụ, mepụta na ire ahịa ngwaahịa na teknụzụ nke bioengineering nke oge a.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị otu egwuregwu nwere ogo dị elu, ha niile nwere asambodo mmụta na-ahụ maka asambodo na postgraduate, wee jikọta njikwa na teknụzụ nwere ntọala siri ike na ahụmịhe bara ụba. Elydabere na shalọ Ọrụ Mpaghara R&D High-tech Mpaghara --lọ ọrụ ---- Changsha Kaixiao Biotechnology Co., Ltd., ọ na-ebukwa nkwukọrịta teknụzụ na imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ mahadum ndị dị mkpa na ụlọ ọrụ nyocha dị ka Huzhou Industrial Biotechnology Center nke Shanghai Academy of Life. Sayensị nke Chinese Academy of Science, Mahadum East China nke Science na Teknụzụ, Hangzhou Nkịtị University, Central South University nke Oke ohia na teknụzụ na ndị ọzọ.The ụlọ ọrụ na-agbaso echiche nke "ịkwalite mmepe na sayensị na teknụzụ, na-ewere nkà dị ka ntọala , itinye uche na kemịkal na-acha akwụkwọ ndụ, na ibelata ihe gburugburu ebe obibi ”, na-ewebata ma na-azụkwa ụdị dị iche iche nke ndị ọkachamara na nka na ụzụ, na-elekwasị anya na mmepe na mmepụta nke biocatalysts n'ọhịa nke kemịkalụ dị mma na ọgwụ mgbochi ọrịa ala ha, chiral amino acid, amino acid. nkwekọrịta na etiti ọhụrụ pụrụ iche. Rlọ ọrụ R&D nke ụlọ ọrụ ahụ nwere akụrụngwa nnwale dị egwu na akụrụngwa nyocha maka usoro mkpụrụ ndụ ihe omimi na enzyme dị ka polymerase yinye nrụpụta, akpaaka njikwa ngwa ngwa, mgbanaka enzyme akpaka, plọg dị elu, ngbanye cell, igwe na-agbaze mmiri, chromatography na arụmọrụ dị elu na spectrophotometer. Ngwá ọrụ ahụ atọrọla ntọala siri ike maka mmepe nke teknụzụ ọhụụ na nrụpụta nke ngwaahịa ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ na-ewepụta ihe dị ka injin ya na-eto, na-eme ka teknụzụ R&D na-arụ ọrụ nke ọma, na-ewuli asọmpi isi, ma na-enye nkwa siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ. nọgide na-ebute ọnọdụ ya na ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe dị ka 100 acre nke mmepụta usoro nke usoro biocatalysts na amino acid na-agbadata na ọgwụ ọgwụ na Ningxia na Shandong. Nmepụta ụlọ ọrụ ahụ agafeela asambodo sistemụ ISO9001, yana usoro ọgwụgwọ mmiri nke nnwere onwe, otu njikwa njikwa zuru oke na akụrụngwa mmepụta. O nwere ikike ịrụ ọrụ nke ọma na mepụta 100 tọn enzyme biocatalytic yana 500 nke amino asịd na ọgwụ ọgwụ na-etiti.
“Icheta ma gbaa ndi otu ume, na achu na inweta ihe ndi n’ilebara anya karie” bu echiche na ntinye aka nke Hunan Nanbeiwang. Companylọ ọrụ ahụ ga-elekwasị anya na mkpa ndị ahịa, na-agbaso nchepụta teknụzụ na ọrụ ọhụụ, ma kpebisie ike imepụta ụdị nke ngwa nke enzyme bio na ngwaahịa ya na-agbadata na ngwaahịa kachasị asọmpi na ụlọ ọrụ ahụ, ma na-aga n'ihu ịkwalite ngwa ọrụ nke teknụzụ nke biocatalysis, gbalịakwa bụrụ onye na-eweta ọrụ ọkachamara nke nkwadebe enzyme, usoro nke amino acid na ọgwụ ọgwụ.
Anyị ji ohere ọ bụla daara gị na-arụkọ ọrụ ọnụ, wee nweta ntụkwasị obi na afọ ojuju site na ngwaahịa ọkachamara na ọrụ anyị dị mma. Hunan Nanbeiwang Biological Technology Co., Ltd ga-abụ onye ọ bụla kachasị amasị gị!